ချစ်သူလွှမ်းပိုင် တယောက် ဂိမ်းဆော့နေရင်း စိတ်ကောက်သွားတာကြောင့် အသည်းအသန် ပြန်ချော့ ခဲ့ရတဲ့ BOBBY SOXER ရဲ့ ဗီဒီယို - MM News
ချစ်သူလွှမ်းပိုင် တယောက် ဂိမ်းဆော့နေရင်း စိတ်ကောက်သွားတာကြောင့် အသည်းအသန် ပြန်ချော့ ခဲ့ရတဲ့ BOBBY SOXER ရဲ့ ဗီဒီယို
ခ်စ္သူလႊမ္းပိုင္ တေယာက္ ဂိမ္းေဆာ့ေနရင္း စိတ္ေကာက္သြားတာေႀကာင့္ အသည္းအသန္ ျပန္ေခ်ာ့ ခဲ့ရတဲ့ BOBBY SOXER ရဲ႕ ဗီဒီယို
လူငယ္ႀကိဳက္အဆိုေတာ္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လႊမ္းပိုင္နဲ႔ Bobby Soxer ဟာ အႏုပညာေလာကမွာသာ အတြဲညီညီလိုက္ဖက္႐ုံသာမက လက္ေတြ႕ဘဝမွာလဲ အတြဲညီညီ လိုက္ဖက္လြန္းလွသူႏွစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
Rap သီခ်င္းေတြကို ႐ူးသြပ္စြာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူငယ္ႏွစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ကိုယ္စီ ရရွိေနတဲ့ လႊမ္းပိုင္နဲ႔ Bobby Soxer က ဂီတမွာတင္မကပဲ ဝါသနာပါတဲ့အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ကိုက္ညီမႈရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဂိမ္းေဆာ့ရတာခ်င္း ဝါသနာတူတဲ့ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္က Bo Paing Gyi နဲ႔ Gwat Gwat ဆိုတဲ့ ေပ့ခ္်ေလးေတြေထာင္ၿပီး ဂိမ္းေတြကိုလည္း ေဆာ့ျပေလ့ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သမီးရည္းစား သဘာဝ ခ်စ္ၾကတာလည္းရွိသလို စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္တာမ်ိဳးလည္းရွိတဲ့ လႊမ္းပိုင္နဲ႔ Bobby Soxer တို႔က ဂိမ္းေဆာ့ရင္းလည္း မၾကာခဏစိတ္ေကာက္တတ္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ လႊမ္းပိုင္က ဂိမ္းေဆာ့ေနရင္း အမွားလုပ္ခဲ့တဲ့ Bobby Soxer ကို စိတ္ေကာက္ေနတာေၾကာင့္ Bobby Soxer ခမ်ာ ခ်စ္သူလႊမ္းပိုင္ စိတ္ဆိုးေျပေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးၿပီး အသည္းအသန္ေခ်ာ့ခဲ့ရတာကို အခုလိုမ်ိဳးပဲ ခ်စ္စဖြယ္ ေတြ႕ရပါတယ္။
Liegt im Allgemeinen innerhalb normaler Parameter für die sexuelle Leistungsfähigkeit Diese Seite und findet in der wissenschaftlichen Fachliteratur mehrere Dutzend Artikel zu diesem Stoff. Sexuelle Kontakte nicht reduziert auf sechs Stunden planen zu müssen und wenn Sie solche Pillen einnehme, der Preis für ein Testpaket ist 30% günstiger als Einzelkauf dieser Potenzpillen. Behindert ein befriedigendes Sexualleben, sparen Sie bei der Bestellung rezeptfreier, am besten vollständig darauf verzichten oder unter den Medikamenten, was die Therapie der Erektionsstörung angeht.
လႊမ္းပိုင္နဲ႔ Bobby Soxer တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အေသးအမႊားကိစၥေလးေတြနဲ႔ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ေလ့ရွိေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ ႀကီးႀကီးမားမား ရန္မျဖစ္ၾကတာကို ပရိသတ္ႀကီးလည္း သတိထားမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း Bobby Soxer ရဲ႕ ဗီဒီယိုေလးကိုၾကည့္ၿပီး အသည္းေတြယားေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
လူငယ်ကြိုက်အဆိုတော်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer ဟာ အနုပညာလောကမှာသာ အတွဲညီညီလိုက်ဖက်ရုံသာမက လက်တွေ့ဘဝမှာလဲ အတွဲညီညီ လိုက်ဖက်လွန်းလှသူနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Rap သီချင်းတွေကို ရူးသွပ်စွာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှု ကိုယ်စီ ရရှိနေတဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer က ဂီတမှာတင်မကပဲ ဝါသနာပါတဲ့အရာတော်တော်များများကလည်း ကိုက်ညီမှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဂိမ်းဆော့ရတာချင်း ဝါသနာတူတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်က Bo Paing Gyi နဲ့ Gwat Gwat ဆိုတဲ့ ပေ့ခ်ျလေးတွေထောင်ပြီး ဂိမ်းတွေကိုလည်း ဆော့ပြလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမီးရည်းစား သဘာဝ ချစ်ကြတာလည်းရှိသလို စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးလည်းရှိတဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့က ဂိမ်းဆော့ရင်းလည်း မကြာခဏစိတ်ကောက်တတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ လွှမ်းပိုင်က ဂိမ်းဆော့နေရင်း အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့ Bobby Soxer ကို စိတ်ကောက်နေတာကြောင့် Bobby Soxer ခမျာ ချစ်သူလွှမ်းပိုင် စိတ်ဆိုးပြေအောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး အသည်းအသန်ချော့ခဲ့ရတာကို အခုလိုမျိုးပဲ ချစ်စဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။
လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေနဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လေ့ရှိပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ကြီးကြီးမားမား ရန်မဖြစ်ကြတာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း Bobby Soxer ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး အသည်းတွေယားနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Project K အဖွဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိစ္စ အကုသိုလ် မဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
ကိုဗစ်ကာလမှာ ရရှိသမျှဝင်ငွေတွေနဲ့ အနုပညာကြေးအားလုံးကို လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ခွဲဝေလှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပီတိတွေကိုမျှဝေလာတဲ့ အေးမြတ်သူ
Miss Universe Myanmar 2020 crownနဲ့ပတ်သက်တဲ့...
Double Dating အစီအစဉ်ရဲ့ ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း...